Ny boom VPN: nahoana no zava-dehibe ny fampiasana azy ireo? | Vaovao Gadget
Vaovao momba ny gadget | 20/06/2022 16:15 | fampiharana
Rehefa nandeha ny fotoana dia nanjary nalaza ny tambajotra tsy miankina virtoaly. Fantatra kokoa amin'ny fanafohezana azy amin'ny teny anglisy (VPN), ireo fitaovana ireo dia ankatoavin'ny mpampiasa an-tapitrisany eran'izao tontolo izao izay mampiasa azy ireo noho ny antony samihafa. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia handinika fohifohy ny momba ity teknolojia ity sy ny fomba ahafahany manampy antsika amin'ny Internet
1 Ny niandohan'ny VPN sy ny ankehitriny
2 VPN sy fiarovana
3 VPN sy fidirana amin'ny fampahalalana
4 VPN sy fialamboly
Ny niandohan'ny VPN sy ny ankehitriny
Amin'ny fotoana izay Ny maha-zava-dehibe ny tambajotra sosialy mihamitombo, ary noho izany dia lehibe kokoa ny fidirana amin'ny Internet, ny fananana VPN dia mety ho zava-dehibe. Araka ny ho hitantsika eto ambany, ity rindrambaiko ity dia afaka miaro antsika amin'ny fanafihana an-tserasera isan-karazany, ary koa manatsara ny traikefantsika rehefa mijery ny tranonkala. Misy fiandohana anefa ny tantara tsirairay.
alohan'ny misintona vpnTsara ny mahafantatra bebe kokoa momba azy ireo. Ity teknolojia ity dia nanomboka nampiasain'ny oniversite, orinasa ary laboratoara izay maniry ny fitaovana rehetra ao anatiny mba hanana fiarovana sy fiarovana mitovy, ary koa ny fidirana lavitra amin'ny rakitra samihafa. Birao maro ankehitriny no manohy mampiasa io karazana rindrambaiko io.
Ankehitriny, niely patrana ankehitriny ny fampiasana VPN mba ahafahana manova ny toerana misy ny fifandraisana Internet. Amin'ny alàlan'ny teknolojia avo lenta izay mampandeha ny fifamoivoizana amin'ny Internet amin'ny tonelina manokana, dia azo atao ny mifandray amin'ny mpizara VPN any amin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao. Noho izany, ny tena adiresy IP dia saronan'ny hafa, izay fanamafisana lehibe ny fiarovana ary koa ny fahazoana fampahalalana.
VPN sy fiarovana
Mifandraika amin'ny lohahevitry ny heloka an-tserasera, VPN dia miasa tsy misy indrafo amin'ny fanaovana antsika tsy ho fantatry ny mpanafika. Lasa zava-dehibe izany amin'ny fampiasana tambajotra iombonana toy ny any amin'ny bara na seranam-piaramanidina, ohatra. Ny protocols fiarovana amin'ireo fifandraisana ireo dia matetika kely, ka ny dingana rehetra ataontsika ao anatiny dia azo voarakitra sy ampiasaina ao amin'ny kaontintsika.
Amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny mpizara VPN dia lasa tsy hitan'ny mpisehatra hafa ao amin'io tambajotra io isika ary tsy vitan'ny hoe mahazo ny fiarovana, fa koa amin'ny zava-drehetra mifandraika amin'ny fiainana manokana: tsy misy na inona na inona ataontsika hisoratra anarana amin'ny anaranay, fitaovana ary adiresy IP, zavatra ankasitrahana ao anatin'ny tontolon'ny tranonkala miha-voafehy.
VPN sy fidirana amin'ny fampahalalana
Amin'ny lafiny iray, ny VPN dia fitaovana lehibe any amin'ny faritany sy firenena izay manitsakitsaka ny fampahalalam-baovao ataon'ny manampahefana ao amin'ny governemanta sy ny orinasa tsy miankina.
Ny teboka fanaraha-maso dia toy izany fa any amin'ny firenena maro dia voararan'ny lalàna ny fampiasana tambajotra VPN, izay miafara amin'ny fanafihana mahery vaika kokoa amin'ny fahalalahana maneho hevitra. Ny fampiasana ireo tambazotra ireo dia fanalahidin'ny mponina hidirana amin'ny votoaty sy fampahalalana rehetra tadiaviny tsy misy fanelanelanana ataon'ny antoko fahatelo na fanaraha-maso ny angon-drakitra azo.
VPN sy fialamboly
Farany, ny firoboroboan'ny VPN dia azo hazavaina amin'ny alàlan'ny fialamboly amin'ny Internet ihany koa. Araka ny efa hitantsika tamin'ity fanamarihana ity, amin'ny fanovana ny adiresy IP amin'ny fifandraisanay, dia hahatonga ny mpanara-dia sy ny mpanara-maso hino fa any amin'ny toerana hafa izahay. Izany dia hanome antsika fahafahana miditra amin'ny votoaty mivantana sy misintona rakitra izay tsy hitantsika eto amin'ny firenentsika.
Ny tranokala lalao an-tserasera, ny sehatra streaming ary ny tranokala fiantsenana matetika no be mpitsidika indrindra amin'ny fampiasana VPN.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » fampiharana » Ny boom VPN: nahoana no zava-dehibe ny fampiasana azy ireo?
Mankany amin'ny dobo izahay miaraka amin'ny Sonos Roam, namana tsara indrindra amin'ny andro fahavaratra [Analysis]